Ny fanandramana antibody COVID-19 vaovao dia mila iray monja isaky ny 6 volana manova ny lalao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fanandramana antibody COVID-19 vaovao dia mila iray monja isaky ny 6 volana manova ny lalao
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Interviews • LGBTQ • Vaovao • People • fanorenana • teknolojia • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Epitome Risk, mpitarika amin'ny fitantanana risika, fepetra fanarahan-dalàna COVID, ary fanampiana azo antoka, dia nanambara fa i Lisa Wilson dia voatendry ho CEO an'ny orinasa mitombo haingana.
Mety ho ity no fiandohan'ny fenitra vaovao amin'ny fitsapana COVID vaovao natao ho an'ny olona vita vaksiny ary koa ho an'ireo tsy manao vaksiny. Ny fitsapana dia hampiseho ny fanoheran'ny vatanao ny viriosy. Raha miabo tsara ianao, dia holazaina aminao ny fahaizan'ny vatanao miady amin'ny COVID-19. Indraindray isaky ny 6 volana dia ilaina io fitsapana io. Heverina ho mpamadika lalao sy mpamonjy aina izy ity.
Tamin'ny taon-dasa, ny ekipan'ny dokotera, mpahay siansa, mpikaroka ary mpiara-miombon'antoka Epitome Risk dia nahalala fa ny fiarovana ny antikônôma no miaro ny olona amin'ny COVID.
Manaiky i Dr. Fauci sy ny White House fa ny fahalalana ny isan'ireo antibody tsy mitongilana vokarin'ny vatanao aorian'ny vaksinin'ny COVID no lakilen'ny fahatakarana ny haavon'ny fiarovana anao amin'ny COVID sy ireo karazany rehetra ao aminy.
Ny ekipan'ny Epitome Risk dia namorona fitsapana azonao raisina avy any an-trano izay hampahafantatra anao ny haavon'ny antibody fampihenanao ao anatin'ny 24-48 ora.
Epitome dia orinasam-pitantanana risika monina any Etazonia, manokana amin'ny fanarahan-dalàna COVID-19 sy ny fiarovana azy. Izy io no mpamatsy lozisialy fanadinana antibody.
Lisa Wilson, CEO an'ny ekipan'ny Epitome Risk, dia monina any Florida, Etazonia.
Lisa Wilson dia vahinin'ny androany Vaovao Mafampana, novokarina niaraka tamin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany.
Dr. Fauci sy ny Trano Fotsy dia manaiky fa ny fahalalana ny isan'ireo hery fanefitra tsy mitongilana amin'ny vatana vokarin'ny vaksinin'ny COVID no lakilen'ny fahatakarana ny fiarovana ny olona manohitra ny COVID sy ny karazany rehetra.
Ny ekipan'ny Epitome Risk dia namorona fitsapana iray izay hahafahan'ny olona hahafantatra ny fatran'ny antibody neutraly azy ao anatin'ny 24-48 ora. Ny valin'ny fitsapana toy izany dia tsara mandritra ny volana maro aorian'ny vita ary hanome porofo mazava ny amin'ny risika ateraky ny olona iray na hanaparitaka ny COVID-19.
Namoaka fanadihadiana i Etazonia omaly 18 aogositra 2021, izay naneho fa ny fiarovana ny vaksinina, na ny hery fanefitra tsy mitongilana vokarin'ny vatanao taorian'ny nahazoanao vaksininy dia nihena taorian'ny volana vitsivitsy.
Samy hafainganam-pandrefesana isan-karazany ny nilatsahan'ny olona tsirairay avy, satria samy hafa ny tsirairay. Ny fampihenana ny tahan'ny antibody dia mihena na oviana na oviana ny vaksiny azonao. Zava-dehibe ho an'ny olona ny mahafantatra ny viriosy manohitra azy.
Tsy ny fitsapana antibody rehetra no manome anao fampahalalana mitovy. Ny fitsapana antibody fanafoanana an'i Epitome Risk no fitsapana tokana an'ny FDA EUA eny an-tsena izay hanome antsipiriany ny haavon'ny fiarovana anao.
"Na manao fanadinana any an-trano ianao na fanadinana antibody hafa dia tsy maintsy ataonao izay hamaritana ny fanamafisana ny fitsapana anao," hoy i Lisa.
Loza mitatao amin'ny Epitome manome serivisy fitantanana risika, ao anatin'izany ny fitantanana risika COVID ho an'ny olona, ​​orinasa, famokarana sarimihetsika, hetsika ara-panatanjahantena ary fivoriana hafa manerantany.
Epitome Risk dia eo am-panaovana mpikambana ao amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany ary hitarika vondrona liana fanandramana COVID-19 vaovao.
Henoy ny famelabelarana vaovao anio.
Diana Nighswonger hoy:
22 Aogositra 2021 amin'ny 12:41
Aiza no andefasako ity kitapom-pitsapana ity ary ohatrinona ny vidiny?
20 Aogositra 2021 amin'ny 06:30
Hainao…. Nanana COVID tamin'ny Desambra tamin'ny taon-dasa…. Manakaiky ny volana septambra izao ary 1.92% ny antibiotika…. Oh ary mbola tsy nahazo ilay “vaksinim-borona” aho